Kittens dzinodya dzoga pazera ripi | Noti Katsi
Kitsi dzinodya dzoga pazera ripi
Monica sanchez | | Zvokudya
Kana katsi ikazvarwa, inongoerekana yaravira chikafu chayo chekutanga: mukaka wamai. Icho chichava chinhu chega chaunodya kusvikira mazino ako atanga kupinda, chimwe chinhu chichaitika mushure memavhiki mana. Ipapo chete ndipo amai vake pavanozomira kuyamwa.
Saka zvakakosha kuziva kitsi dzinodya dzoga pazera ripi, uye nechikafu chipi chatingavape kuti vagadzirire kana nguva yacho yasvika.
1 Katsi dzinodya dzoga pazera ripi?
2 Ungaziva sei zera rekati?
3 Chii chinodyiwa katsi achangoberekwa?
3.1 Chii chandingapa mwana katsi?
4 Kurumura sei katsi?
5 Ko katsi yemwedzi inodya chii?
6 Ungadzidzisa sei kati kudya yega?
7 Kubva pazera ripi ini ndinofunga kuti katsi dzinodya?
Katsi dzinodya dzoga pazera ripi?
Izvo zvinoenderana zvakanyanya nhangemutange, asi kazhinji pakati pemwedzi nehafu nemwedzi miviri vanotova neshaya yakasimba zvakakwana kuti vadye. Zvinoitika ndezvekuti pazera iro vanenge vachiri vadiki zvekuvapa chikafu zvichienderana nekuti chii, saka zvinokurudzirwa kuvapa chikafu chakanyorova kuti zvive nyore kwavari kudya.
Muchiitiko chaunosarudza kuvapa chikafu, chinofanirwa kuve chakanangana nekiti, sezvo tsanga iri diki kwazvo. Uye zvakare, zvakakosha kuti usaunze zviyo, nekuti zvinogona kukonzera allergies.
Ungaziva sei zera rekati?
Kuti chinyorwa ichi chikubatsire zvakanyanya kwauri, ndiri kuenda kukuudza kuti ungazive sei zera rekatsi diki, nekuti imwe yevhiki haidye zvakafanana neimwe yemwedzi.
0-3 mazuva ehupenyu: akavhara maziso, akavhara nzeve uye chigutsa chembilical tambo.
Mazuva 5-8: nzeve dzakavhurika. Inogona kutanga kukambaira asi zvishoma.
2-3 mavhiki: anotanga kuvhura maziso ake, rinova rebhuruu (achapedzisa kuvhura kusvika kupera kwevhiki rechitatu). Pazera rino mazino evana anobuda, yekutanga kuve iyo incisors.
3-4 mavhiki: maini ake anobuda, uye ave kutofamba neushingi, kunyangwe achizeya zvishoma.
4-6 mavhiki: Iwo ma premolars, ayo ari mazino ari pakati pematinini nemamolars, anobuda. Ruvara rwekupedzisira rwemeso rwuchatanga kuratidza. Pazera iri mhuka inorarama sembwanana ine misikanzwa: inotamba, inomhanya, inorara, uye dzimwe nguva inodya.
4 kusvika 6 mwedzi: inoita hupenyu hwakajairika. Unogona kuva wekutanga kushingaira, uye meno asingagumi anobuda:
6 incisors mushaya yepamusoro uye 6 mushaya yepasi
2 canines mushaya yepamusoro uye 2 mushaya yepasi
3 premolars mushaya yepamusoro uye 2 mushaya yepasi
Chii chinodyiwa katsi achangoberekwa?
Sezvatataura, iyo katsi paanongoberekwa anotsvaga mai vaamai vake kuti vape mukaka wake. Ichi chinofanirwa kuve chikafu chako chekutanga, sezvo chiri chakanyanya kukosha. Ndiyo yega ine zvese zvinovaka muviri zvaunoda kuti uve nemavambo akanaka ekukura uye, zvakare, hutano hwakanaka.
Uye ndizvo izvozvo mukaka wemukaka uri chaizvo colostrum kwemazuva maviri ekutanga, inova sosi yakapfuma kwazvo yema immunogloulins (antibodies anodzivirira kubva kumavhairasi, mabhakitiriya, nezvimwewo izvo zvinokonzeresa zvirwere) (kukupa zano: mumukaka kusangana kwacho kuri pasi pegiramu rimwe paita, kana zvichienzaniswa ne1-40g / l Ye feline colostrum). Kana iyo mbwanana isina mukana wekunwaZvichida nekuti amai vakafa, vari kurwara kana vasingadi kuitarisira - chimwe chinhu chingave chisingawanzoitika, nenzira-, ndichave nenguva yakaoma yekupona.
Chii chandingapa mwana katsi?
Kitten yangu Sasha ichinwa mukaka wayo munaGunyana 3, 2016.
Zvakajairika kuwana katsi mumugwagwa, isina amai. Muzukuru wangu akawana katsi yangu Sasha muna 2016 mumunda, uye ini pachangu ndakawana wangu Bicho ane rudo padyo nenzvimbo yehutano. Aive nemazuva mashoma chete ekuzvarwa; kutaura chokwadi, anga asati asvinudza meso ake. iye, kune rumwe rutivi, anga atova nemwedzi. Asi zvakare, kuvaburitsa kwaisave nyore.
Isu taifanirwa kuzvidzora pachedu zvakanyanya, kuyedza kuti tisatonhora kana kunyanya kupisa, uye pamusoro pezvose kuti tidye zvakanaka, zvikasadaro vangadai vakarwara. Ichi ndicho chikonzero kana iwe ukasangana nekatsi katsi, zvakakosha kuti umupe mukaka wekutsiva kuti iwe unozotsvaga kutengeswa mumakiriniki ezvokurapa ezvipfuyo kana muzvitoro zvezvipfuyo, uye kuti iwe uteedzere mirairo yakanyorwa pairi kune tsamba, maawa mana kusvika mashanu (kunze kwekunge husiku kana aine hutano: kana aine nzara anokuzivisa iwe, usazvidya moyo).
Kana pasina nzira yekutsvaga yekutsiva mukaka, unogona kumupa anotevera akagadzirwa mukaka wekaka musanganiswa:
250ml isina lactose mukaka wakazara
150ml rinorema kirimu
1 zai yolk (isina chero chena)
1 tablespoon yeuchi
Ita shuwa kuti inodziya, ingangoita 37ºC. Kana kuchitonhora kana kupisa, haadi kuida, uye izvo hazvireve kuti zvaisazove zvakasikwa kumupa zvakadaro.
Kurumura sei katsi?
Kitty inofanira kutanga kudya zvinyoro zvinyoro zvikukutu zvakapoteredza yechitatu-yechina vhiki rekuzvarwa. Pazera rino maziso ake achange akavhurika, neruvara rwebhuruu, uye achafamba nekuwedzera kuchengetedzeka uye kuvimba. Vamwe vanokurudzirwa kuti vamhanye, saka havachazoda kuve muchivako / mubhokisi.
Kana iye aine amai, ivo vachatarisira kumuudza kuti havachamupe mukaka pese paanoda, kuti inguva yekuti adye zvimwe zvinhu. Asi kana asiri rombo rakanaka, saka uchafanirwa kunge uri iwe unomupa mukaka uye ini ndinofunga zvakasiyana. Ini ndichakuudza kuti ndakazviita sei:
Vhiki rekutanga rekurumura: mabhodhoro mana + maviri servings e patés e kittens pazuva
Vhiki rechipiri: matatu mabhodhoro + matatu servings epatés
Vhiki rechitatu: mabhodhoro maviri + mana epa patés
Kubva pavhiki yechina uye kusvika aine mwedzi miviri yekuberekwa: 6 servings ye patés, imwe yakanyoroveswa mumukaka
Ko katsi yemwedzi inodya chii?
Tichifunga nezvekuti, kazhinji, kittens dzinotanga kuratidza kufarira chikafu mwedzi mumwe mushure mekuzvarwa (kunyange zvingave zvakadaro kuti kune vamwe vasingade kurega kunwa mukaka kusvika kumwedzi miviri), zvinokurudzirwa zvakanyanya kuti, mushure memazuva makumi matatu, enda unovapa patés (chikafu chinonyorova) chekatsi. Kuitira kuti ivowo vawane budiriro yakanaka, ini ndinokurudzira kuti iwe usarudze yakanaka mhando iyo ine yakakwira nyama yezvinyorwa (kwete pasi pe70%).
Iwe unogona zvakare kumupa chikafu chakanyoroveswa mumukaka wekutsiva, asi kubva pane zvakaitika ndinokuraira kuti umupe magaba, sezvo zvichizomurerukira kuti adye.
Ungadzidzisa sei kati kudya yega?
Iyo katsi inodzidza nekuteedzera amai uye vanin'ina. Kana asingagare navo, dzimwe katsi dzinogona kuve mudzidzisi wake, asi kana uyu mudiki ari iye chete mukadzi wenyama wauinaye pamba, zvinokwanisika kuti pakutanga unofanira kumubatsira kudzidza kudya.
Kana iwe ukazviwana uri mumamiriro ezvinhu aya, tora chikafu chidiki - chingangoita chero chinhu, semusoro wematch - woisa mumuromo mako wozovhara zvinyoro nyoro asi zvine simba. Pachisikigo, iye achamedza uye ipapo angangove achadya ega.
Kubva pazera ripi ini ndinofunga kuti katsi dzinodya?
Zvinoenderana nekuti nderudzii rwekudya: kana yakanyorova, mu patés, unogona kudya kubva pavhiki rechitatu kana rechina; Kune rimwe divi, kana iri yakaoma, kana uchifanira kuitsenga, uchafanirwa kumirira mwedzi miviri kuti utange kuipa, uye kunyangwe ipapo ungatofanira kuinyudza nemvura kuti zvive nyore kwauri.
Izvo zvakakosha kuti uzive izvozvo usamhanye kupatsanura amai vacho nekiti. Iye anozoziva kana vana vake varega kunwa mukaka - kazhinji, pamwedzi miviri, asi zvinogona kutora nguva yakati rebei, kunyanya kana ari makuru marudzi akaita se Maine Coon kana the Sango reNorway-. Kubva pamwedzi 3-4, kittens inokwanisa kudya chikafu chakaoma pasina matambudziko, nekuti mazino avo achapedzisa kukura zvachose munguva pfupi.
Sezvo nguva inopfuura nekukurumidza, tinokukurudzira kuti ugare wakagadzirira kamera yako tora iwo anosetsa nguva Kubvira paudiki hweshamwari yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Zvokudya » Kitsi dzinodya dzoga pazera ripi
Antonella Bazán akadaro
Mhoroi, ndine kitti ina dzakangosvitsa mwedzi mumwe chete uye imwe yacho yaida kudya chikafu chaamai.Ichi chingave chiratidzo chekuti vagadzirira kudya chikafu nekusiya mukaka?
Pindura Antonella Bazan
Monica sanchez akadaro
Hongu, zvirokwazvo. Iye zvino unogona kutanga kumupa chikafu chakanyoroveswa mumvura, kana magaba emakiti. Asi kusvika pamwedzi miviri zvakafanira kuti anwe mukaka waamai vake nguva nenguva.
Pindura Monica Sanchez
Mhoroi, ini ndichangobva kutora katsi ingangoita mwedzi, vakamusiya asiyiwa, haazive kudya chinhu kana kufarira kuzviita, ndinomupa chikafu chakakangwa nenyama yepasi uye hapana, ndaifanira kutenga mukaka chaiwo kittens uye kumupa bhodhoro, Zvandinoziva Zvinoita kuti zvindiomere sezvo ini ndichishanda zuva rose, chii chandingaite kudya ndoga ??? Anotaridzika akagwinya uye akasvinura kwazvo, dambudziko roga ndere kana zvasvika pakudya, zvinoenderana ne100% pandiri.
Pindura kuna Leidy
Pazera iro katsi yako inoda mumwe munhu wekumupa chikafu, zvirinani kusvikira asvitsa mamwe mavhiki maviri. Iwe zvirinani bvunza mudiwa kuti uone kana ivo vanogona kutora pamusoro. Unogona kuedza kumupa chikafu chekatsi yakanyorova, kana chikafu chekatsi chakaomeswa chakanyikwa mumukaka, asi iye achiri mudiki kwaari kuti adye ega.
Mhoroi, ndine katsi ine mwedzi miviri yekuberekwa asi haadye ega. Ndakaisa chikafu chekatsi chakanyikwa mumvura, mukaka wekati uye haafarire chero ... ndinofanira kupa bhodhoro rangu uye chikafu. Ini ndatova ndaneta nekuti ndanga ndiri mune ino mamiriro kubvira ini ndaive nemazuva gumi ekuberekwa, uye dzimwe nguva handina nguva.
Zvinobatsira handizive kuti ndoita sei kuti ndiite kuti adye ega. Ndabatanidzawo chikafu chake nemagaba ekitsi uye anodya zvishoma asi kwete ese.
Pindura kuna Alejandra
Dzimwe nguva kittens dzinoda kunwa mukaka wekatsi kwenguva yakareba. Wakamboedza kumupa tuna here? Kuva chikafu chakapfava, zvaisazobata kuve nezvinetso kuchitsenga.
Chero zvazvingaitika, kushanyira vet hakukuvadze, sezvo uchigona kurwadziwa nemuromo kana mudumbu.
Kwaziso uye kukurudzira kukuru.
Migatita akazvara musi wa11 uye ndaive nekiti mbiri dzakanaka ndinovimba dzakafanana naye kwemasvondo matatu akatanga kuda kudya muto nemuto kunyange hazvo asati ambobvumira mai vake kuyamwa mai vake vakagamuchira yorsai yangu
Pindura kuna m. Sol
Pazera iro vamwe vanotanga kuda kuyedza dzimwe mhando dzechikafu, asi kusvika pamwedzi miviri kana zvakadaro vacharamba vachinwa mukaka nguva nenguva.
Mhoroi, katsi yangu yakabereka makatsi mashanu mazuva gumi nemashanu apfuura, vaive mubhokisi padyo nenzvimbo yekubikira, asi ikozvino arikuda kuvaendesa kunzvimbo iri pasi pemubhedha, chingave chii chikonzero? Iwe haudi nzvimbo here kana kuti imhaka yekuti vakura?
Unogona kusada nzvimbo. Iyo kicheni imba inogara vanhu vanopedza nguva yakawanda, asi hapana munhu ari pasi pemubhedha 🙂.
Mhoroi, mazuva mashoma apfuura takasangana nekatsi ingangoita mwedzi kana mwedzi nehafu, ndakatanga kumupa bhodhoro maawa matatu ega ega asi aingozvitora zvakanaka mazuva maviri kana matatu ekutanga uye haadi zvakare, isu takatanga nepate uye kibble yekatsi uye anoidya yakakura dambudziko nderekuti hatizive kuti kangani kumudyisa, kana tiri kumupa yakawanda kana zvishoma
Zvakanakisisa kusiya feeder yagara izere, nekuti idzi mhuka dzinodya zvishoma kazhinji pazuva 🙂.
Chero zvazvingaitika, kana iwe usingade kana usingakwanise kugara uchisiya zvakasununguka zviripo, iyo inokurudzirwa huwandu maererano nezera rako uye huremu hunoratidzwa pabhegi rekudya, asi zvakati kana zvishoma zvinoenderana neanosvika magiramu makumi maviri nemashanu pazuva (panofanirwa kuve 25 servings maawa makumi maviri nemana ese).
Francisco de la Fuete akadaro
5 servings ye25grs. zuva nezuva, hazvina kunyanyisa here?
Pindura Francisco de la Fuete
Ndinokutendai nekubvunza, nekuti nenzira iyoyo ndaigona kuona kuti ini ndakanyora chirevo changu zvisizvo. Ini ndaida kutaura, angangoita 25 magiramu pazuva anopararira pamusoro pe5 servings.
Iye zvino ndinozvigadzirisa.
Mhoroi, ndine katsi yandakasiya amai vayo ndichangoberekwa, ave kuda kusvitsa mwedzi ndokumudyisa nemukaka wakabuda, asi sezvo asingade kunwa, zvingave zvakanaka here kutanga kumupa kuravira kwechikafu ?
Ehe, pazera iro iwe unogona kutanga kudya yakanyorova katsi chikafu, kana chikafu chakanyoroveswa mumukaka kana mvura.
Mhoroi, ndine makiti mashanu ane mwedzi mumwe uye vanodya zvavo voga uye vanonwa mvura, havagari vakanyarara uye vanobuda mubhokisi ravo uye amai vavo havana hanya navo, vaida kuziva kana ndichigona kuendesa ivo kuna varidzi vavo. Ndatenda
Kittens inofanirwa kuve naamai vavo uye vanin'ina vavo kwemwedzi miviri. Kunyangwe kana vakatodya vega uye vasingamire vakamira, vanofanirwa kuziva kuti ndeyipi miganhu yemagariro, kusanganisira: sei uye riini ini ndinogona kutamba nemumwe munhu, kuruma kwakanyanya kungave kwakadii, pandinofanira kumira kunetsa vakwegura, .
Pasina hwaro uhwu, mukana wekuti iwe unozopedzisira wagadzira matambudziko kumhuri yako nyowani wakanyanya kwazvo.
Lucia Strange akadaro
Mhoroi, ndine vana vatatu vane mwedzi mumwe chete uye ini handizive kana ndogona kutanga kuvapa chikafu chakasimba senge gatarina kana makoketi ... ndiri kunetsekanawo kuti vane nhata uye vanonanzva zvakawanda zvandinogona kuzviita. kana kana ndichigona kuvagezesa nehumwe hunodzora.kutenda uye nezve.
Pindura kuna Lucia Estraño
Hongu, nemwedzi vanogona kutanga chikafu chakasimba, asi zviri nani kutanga nekunyorova kana kwakanyoroveswa chikafu mumvura.
Kune nhata, chinhu chavo ndechekumirira kusvika vasvitsa mwedzi miviri, asi chokwadika, havazove navo kwemwedzi. Unogona kuita zvinotevera: cheka ndimu muzvidimbu woisa muhari ine mvura, kusvikira yavira. Wobva wadira mvura iyoyo (isina zvimedu) mudhishi, mirira kuti ipise uye kugeza makiti.
Izvo zvakakosha kuti iwe uome zvakanaka mushure meizvozvo, kunyanya kana iwe uri munguva yechando, nekuti zvikasadaro vanogona kutonhora.
Mhoroi mwedzi unotevera ndinoda kutora katsi yavakandipa. Handizive kana ndichifanira kuzvigamuchira sezvo ndisina kuziviswa uye ndinotya kuti mudiki anozowana matambudziko kana kumuparadzanisa naamai vake anozorega kudya kana kuti anofanira kunwa mukaka uye haazove naamai vake kumuyamwisa.
Katsi ingaparadzaniswe rini naamai vayo?
Chii chandinofunga kuti ndingakupei?
Pindura kuna Lucia
Katsi dzinogona kupatsanurwa kubva kuna amai vane mwedzi miviri. Panguva iyoyo vanogona kutodya chikafu chekatsi pasina dambudziko.
Kwaziso ndine katsi ine vhiki mbiri, ndinofanira kumudyisa chii? Vatova pazera iro vanoita zvavanoda vega?
Pazera iro unofanirwa kutora bhodhoro nemukaka wekiti, uye kubva pavhiki rechitatu kana rechina unogona kutanga kupa chikafu chekatsi chakanyudzwa mumukaka - kwekitsi-.
Iye achiri kuda rubatsiro rudiki kuzvisunungura iye, hongu. Mushure mekudya kwega kwega, iwe unofanirwa kupfuudza gauze kana donje rakanyorova nemvura inodziya kuti uite weti uye uende
Ndatenda zvikuru neruzivo.
Inguva yakareba sei ini ndinofanira kuve ndichipfuudza donje kwaari?
Kweminiti zvinokwana. Kwazisai uye ndinokutendai.
Mhoroi, svondo rapfuura ndakawana katsi muyard mangu, ndakafunga kusaibata nekuti ndaifunga kuti yakatorwa naamai vake. Ndichangoti garei ndakaona amai vacho, avo vaive nharaunda. Ndakamupa chikafu chinyoro kuti ave netsitsi uye ane hushamwari… akadya. A chinguva chidiki apo ini ndakasangana nekatsi ndiri ndega, iye akanditukawo. Ini handidi kuvaparadzanisa uye ndinoziva kuti katsi imhuka yemumwe munhu. Ndingagone kunyepedzera kunge katsi yaive yangu kunyangwe amai vake vaifungira dzidziso dzevanhu? Ini ndanga ndisingade kukanganisa iwe mune yako feline hama inesimba… Chii chandingatarisira?
Unogona kuwana kuvimba kwemwana wako nekumupa chikafu chakanyorova, sezvo ichinhuwirira kupfuura kuoma uye chiri chinonaka kwavari. Zvishoma nezvishoma uchaona kuti zvichaswedera sei pedyo newe.
Ushingi, iwe uchaona kuti iwe uchazviita 🙂
Manheru akanaka, ndatenda nekatsamba aka, ndangotora kiti kandakawana kasiyiwa mumugwagwa zvachose ndega, ndakamuendesa kuna chiremba uye akandiudza kuti aingova nemazuva gumi nemasere ekuberekwa, ndakamutengera fomula yake uye ndakafunga kuti aisazorarama husiku hwekutanga, nerombo rakanaka pano pachine vhiki neni, saka ndakacheuka kuno kwandaigona kudya chikafu chakasimba, kwaziso!
Kutenda iwe, uye makorokoto pane mutsva nhengo yemhuri 🙂
Mazuva matatu apfuura gomba rekubhejera rakaonekwa mubindu rangu. Takamuendesa kun'anga uye akatiudza kuti anga ane mazuva makumi maviri ekuberekwa, asi haana kutsanangura kuti ndinofanira kumubatsira kuzvisunungura. Ndoita sei? husiku hwekutanga akabaya asi haana kuzviita zvakare
Pindura kuna Juliana
Nemazuva makumi maviri unofanira kudya ese maawa 20-3, bhodhoro nemukaka wekiti, kana kukundikana kuti unofanirwa kusanganisa kapu yemukaka wakazara (kunyanya isina lactose), zai rezai (kwete chena) uye chipunu mukaka wekirimu dhizeti. Mushure mekudya kwega kwega, unofanirwa kumubatsira kuzvisunungura nekupfuura gauze rinodziya pamusoro penhengo yekubereka, kubva kumagumo edumbu rake kudzika kumakumbo.
Pazera iro iwe unogona kutanga kupa chikafu chekatsi chakakamanikidzwa, asi chinofanirwa kuunzwa zvishoma nezvishoma. Kusvikira ava nemwedzi nehafu, anofanira kuramba achitora bhodhoro.
Mangwanani akanaka! Ndine katsi kane kane mwedzi mumwe chete, amai vacho vakafa zuva rangu diki.Mubvunzo wangu ndewekuti kana ndichigona kuvapa chikafu, vanotora mabhodhoro maviri uye vamwe vaviri havadi kuitora ...
Ndine hurombo nekurasikirwa nekatsi yako 🙁
Vako vadiki vane mwedzi mumwe vanogona kutanga kudya chikafu chakasimba, senge chinyoro chikafu chekiti kana chikafu-chemakiti- akanyoroveswa mumvura.
Zvisinei, zvirinani kusvika kumavhiki matanhatu ekuberekwa zvinokurudzirwa kuva nazvo ndiro ine mukaka -kana kittens- nekuti nguva nenguva vanofarira kunwa. Ehezve, kubva pavhiki rechinomwe kana rechisere vanofanirwa kungonwa mvura chete.
Mhoro!! Ndine vana vatatu vane mwedzi mumwe chete, katsi yangu, amai vake vakafa uye nzvimbo dzekubhejera hadzidi kunwa mukaka kana kudya chero chinhu, asi mwanasikana wangu mudiki akavapa chingwa chakapfava chavaidya uye dzimba dzekubhejera dzakachidya. kudya chingwa? Kana kuti zvinorwadza kuidya? Sezvo zviri izvo izvo nguva inoita kunge 🙁
Kwete kuita ……
Zvakanaka, hazvina kushata zvakadaro, asi mushure memwedzi ivo vanofanirwa kutanga kudya zvakapfava katsi chikafu, sekufunga kwangu kunyorova. Ehe, yakanyoroveswa kwazvo nemukaka kana mvura inodziya, nekuti kana zvisiri, ivo havangazvidye.
Kunyangwe zvakadaro, panguva ino vanojaira uye kuti vasafe nenzara, zvirinani kuti varambe vachidya chingwa chisina kunyorova. Asi enda unosuma iyo yakanyoroveswa feed feed zvishoma nezvishoma. Iwe unogona zvakare kuyedza yakaoma katsi chikafu, zvakare yakanyoroveswa.
Mhoro! Ndine kitsi nhatu dzinenge mwedzi, amai vavo vakafa uye ndakavapa mukaka wakawanda nekuti handina kuwana mukaka wekiti, ndinoanyudza mukaka iwoyo uye maviri anodya zvakanaka, asi imwe haina uye inochema zvakanyanya, uye parutivi ndinofunga kuti varikuita zvakaipa nekuti vava nemanyoka izvozvi. Zvandinoita? Ndinonzwa senge handivatarisi zvakanaka.
Mukaka wemombe kana wemakwai unowanzove wakashata kumakati. Asi kana iwe usingawani yakatarwa yeimwe kittens, hapana imwe sarudzo asi kuzviita isu pachedu ... kumba 🙂. Cherechedza iyi recipe:
150ml mukaka wakazara
50ml ye yogati yakasikwa
Raw zai yolk-isina chero chena-
Teaspoon yekirimu inorema
Sakanidza zvese zvakanaka, pisa zvishoma kusvika kudziya, uye shumira.
Zvisinei, pazera iro iwe unogona kutanga kuvapa yakanyorova katsi chikafu, chakachekwa zvakanaka. Kana kunyangwe yakanyorova katsi chikafu chakanyoroveswa mumvura.
Mhoroi, ndine katsi yavakandipa mwedzi kana zvakadaro, ndaida kuziva kana ichikwanisa kudya chikafu chakaomarara (tuna, huku, minced nyama), kana ichiri diki kwazvo, uye kana zvikasakwanisika izvo, ndezvipi zvekudya zvinondikurudzira. Ndatenda
Pindura kune dalma
Ehe, nemwedzi unogona kutanga kudya chikafu chakasimba chekitchen, senge magaba.
Uye nemavhiki matanhatu kusvika manomwe zvichakwanisika kumupa nyama yakagayiwa.
Hector david akadaro
Kitsi yangu ine mazuva gumi nemashanu ekuberekwa .. Asi amai vake havana mukaka upi waunokurudzira
Pindura Hector David
Zviri nani kunwa mukaka wakagadzirirwa kittens, inotengeswa mumakiriniki ezvipfuyo uye zvitoro zvezvipfuyo.
Kana iwe usingakwanise kuiwana neimwe nzira, unogona kumugadzirira izvi:
-150 ml yemukaka wakazara (lactose-yemahara, zvirinani)
-50 ml mvura
-50 ml yogati yakasikwa
-Raw zai yolk (isina chero chena)
-Tipuni yemaheavy cream
Sanganisa zvese zvakanaka, uye pisa zvishoma, kusvikira kwadziya (anenge 37ºC).
Kwaziso, uye kurudziro 🙂.
Silvia Petron akadaro
Mhoroi, ndine katsi ine mwana wake, kitsi dzine mwedzi 1 uye vanoenda kunotamba.Ndanga ndichida kuziva kana zvakafanira kuvapa chikafu kunze kwechikafu chavanopihwa naamai vavo uye kana vachifanira kupihwa mvura. Ndatenda
Pindura Silvia Petrone
Hongu, pamwedzi mumwe chete vanogona kutodya chikafu chekatsi. Inokurudzirwawo zvikuru kutanga kuvapa mvura.
Mhoroi, makadii? Ndakanunura katsi nezuro uye ndiri kuenda kunomutora, achiri kutya zvese kubva zvaakapotsa amhanyiswa, handizive kuti ndomudyisa chii sezvo anga asati ambowana katsi, chii iwe unokurudzira ndezve mwedzi nehafu, ndinovimba mhinduro yako, ndatenda.
Pindura kuna danieri
Pazera iro anogona kutodya chikafu chakasimba (chakapfava), chakadai sechigaba chekitsi kana chikafu chekatsi chakanyoroveswa nemvura.
Kwaziso, uye makorokoto 🙂.
Mhoroi, ndine kitsi mbiri dzine mwedzi mumwechete dzandakafudza nemukaka wekatsi kubvira pavakazvarwa, ndakatanga kuvapa ndinofunga uye chiLatin, imwe yacho inodya chikafu ichi zvakanaka nekunwa mvura asi imwe yacho hapana nzira kudya chero chinhu, anongoda bhodhoro randakaedza kumhanyisa mukaka muchidyiro asi kana, handitombomupa bhodhoro kuti ndione kana achidya nenzara asi hapana. Hazvityisi kuti ari kudya zvishoma uye haasi kudya zvakanaka
Pindura kuna Jennifer
Wati waedza kumupa chinyoro chikafu chekatsi? Kana zvirizvo, edza kumupa muto wehuku (usina mabhonasi), kana kumuzivisa (zvishoma zvekumanikidza asi usingamukuvadze) chidimbu chakanyorova. Vhura muromo wake, upinze uye uvhare. Ramba wakavharwa kusvika wamedza.
Izvi ndizvo zvandaifanirwa kuita nekitsi yangu, uye ikozvino anodya chero chavaisa paari. Anoda zvese: s
Uye kana iwe ukaona kuti hapana nzira, enda naye kuna vet kuti aone kana paine chero kusagadzikana kunomutadzisa kudya.
Mhoro . Ndine kakiti kane mavhiki matatu ekuberekwa uye kane kittens kane asi kane mazuva maviri kana kudarika pane paanodzidyisa zvinorwadza uye anonyunyuta nekurwadziwa kwake, ndoita sei? Ndatenda
Pindura kuna Maria
Kana kittens dzave nemavhiki matatu ekuberekwa, dzinogona kutanga kudya zvinyoro zvinyoro zvikukutu, zvakadai semakani echikafu chekatsi yakanyorova.
Unogona kuvapa zvishoma - zvakanyanya, zvishoma - nemunwe wako, uchiisa chikafu mumuromo wavo, pasina kumanikidza. Iwe unongo vhura muromo wayo uye kuidyisa mukati mayo.
Muchiitiko chekuti havadi, uye tichifunga kuti amai vatotanga kunzwa kurwadziwa kana vachivayamwisa, tinofanirwa kuomerera.
Imwe sarudzo ndeyekutenga mukaka wekiti - unotengeswa mumakiriniki ezvokurapa - uye edza kuti vanwe kubva muchidyiro.
Nemwedzi miviri iyo kitsi dzinogona kutodya dzoga, ndinofunga kana magaba ezvinyoro zvekatsi chikafu. Kana iwe usiri kuida, iwe unogona kuinyudza mumvura kana muto wehuku (isina bonasi).
Kutenda iwe, Luis. 🙂
GUADALUPE ZVINOSHAMISA akadaro
Mwedzi miviri yapfuura ndine kittens kani mashanu, amai vavo vakavarasa mushure mekuzvarwa kwavo asi havabviri, vanotya zvese uye pese pandinouya kuzovasiira chikafu chavo vanomhanya kwese kwese, mubvunzo wangu ndewekuti vangadya here makuki? '
Pindura GUADALUPE TORRELLY
Nemwedzi miviri iwe unogona kumupa chikafu chekati dzinonyoroveswa mumvura. Nenzira iyi vanozojaira kunwa chikafu chakakosha.
Kana vakasazvida, vapei chikafu chinonyorova chekatsi, uye isa ndiro yemvura padyo navo kuti vagone kunwa pese pavanenge vachida.
Ndine kusahadzika, ndine katsi mbiri dzine mavhiki matatu ekuberekwa (zvinoenderana naamai vangu), uye zvinoenderana nezvandinoverenga pano vanogona kutanga kudya zvinhu zvakanyoroveswa, asi zvinoenderana naamai vangu, kwete kusvikira mazino avo abuda (ayo anofunga kuti havana). Zvandinogona kuita?
Mai katsi havana kuvafarira 4 kana 5 mazuva apfuura. Uye ikozvino isu tinokupa iwe dairy kutsiva katsi. Isu tinopa iyo nejekiseni. ndinofanira kuchinja bhodhoro here?
Ndomira rini kumubatsira kuenda kuchimbuzi?
Kana amai katsi vanga vachivachengeta zvakanaka kusvika zvino uye hakuna kumbove nematambudziko, chokwadi chekuti ivo vanotozvidza tudiki izvi nekuti vanoziva kuti vakura zvekugona kuzvidyisa. Ehe, ini ndinofunga chinyoro chikafu chekiti kana chikafu chakaomeswa chekiti dzakanyoroveswa mumvura.
Nemavhiki matatu hazvidi kuti uvape bhodhoro.
Ndatenda zvikuru Monica
Julissa Fernandez Cueva akadaro
Mhoroi, ndine katsi ine mwedzi miviri yekuberekwa, ndanetsekana kuti anodya zvakawandisa uyezve akanaka, ndinomushandira zvishoma uye saka anoramba achirutsa, ndiudzei zvakajairika? Ini handizive zvekuita, ndinonetseka nekuti ndinonamata fluff yangu
Pindura kuna Julissa Fernández Cueva
Iwe unogona kunge uine hutumbu hutumbu. Zano rangu nderekuti iwe enda naye kuna vet kunorapwa.
Mhoroi, ndine katsi iyo mazuva makumi mana apfuura anga ane mbwanana, ndaifanirwa kumupa mishonga yekudzivirira nhumbu nekuti anga atanga kupinda mukupisa, kusvika oparesheni ichiri kuyamwisa mbwanana, iyo nyaya yekuti anonwa mapiritsi ichaita chimwe chinhu kwavari.? ??
Mukutaura ndingati kwete, asi zvirinani kuti ubvunze chiremba wemhuka.
Mhoro!!!! Vari kuzondipa katsi remwedzi nehafu uye ndanga ndichifunga kuti zvakafanira here kumupa mukaka wakakosha kwaari mubhodhoro, kunyangwe paanenge ave kutodya ndinofunga ...?
Uine mwedzi nehafu unogona kutodya zvisvinu (chakanyorova chikafu chekatsi, kana chikafu chekatsi chakaomeswa chakanyikwa mumvura).
Mhoroi, takagamuchira katsi, vakatiudza kuti ane mwedzi miviri, asi anorema 2 gramu, zvakajairika uye zvakajairika kuti haatambe, anorara nguva dzese, anongofamba achidya chikafu chake uye kuenda kubhokisi remarara kuti azvisunungure. Ndichaonga mhinduro yako. Carina
Kurema kwacho kwakanaka, uye zvakajairika kuti iye apedze nguva zhinji akarara, asi kana akasatamba chero chinhu, imhaka yekuti chimwe chinhu chinoitika kwaari. Iwe unogona kunge uine hutumbu hutumbu. Unofanira kuenda naye kuna chiremba wemhuka kuti amuongorore uye kuti amupe kurapwa kwakakodzera.
Mhoro, tarisa, ndine makiti mashanu atova nemwedzi ekuberekwa ... ane meno uye ndafunga kuvatengera chikafu chekatsi ... vamwe vanodya ... uye katsi inovapa mukaka zvakafanana ... hazvina kunaka ivo kunwa mukaka uye kudya imwe kana imwe tsanga ... aiwa Vanodya zvakanyanya, vanongodya dzimwe tsanga ... hazvizovakuvadze chaiko ... girenayiti yandinotenga idiki diki ... uye vanobata tsvina mubhokisi rejecha.Ndatenda
Kana amai vachiri kuvapa mukaka, zvakanaka. Asi hongu, nemwedzi ivo vanotofanira kutanga kudya zvakati wandei chikafu chakasimba 🙂.
Rossana Parada akadaro
Mhoroi, ndine katsi yemwedzi gumi nematanhatu, ane hypoplasia, kunyangwe izvi achirarama hupenyu hwakajairika, zvinomukuvadza kunwa mukaka, unofanirwa nguva nenguva, kwaziso
Pindura Rossana Parada
Mukaka wemombe unogona kurwisa katsi. Nekudaro, kana isina lactose-isina kana yakanangana navo, unogona kuitora nguva nenguva.
Mhoro! Pasina vhiki rapfuura ndakagamuchira katsi, sezvo katsi yeshamwari yaive nekiti uye yaitadza kugara navo vese, ndakamubata paakatanga kudya ndinofunga kunyorova, asi kubva kuzvinhu zvandakaverenga, handidi ziva kana takaita zvakanaka kumuparadzanisa nekukurumidza kubva kuna amai vake (inenge mwedzi nevhiki rapfuura), anonamira kanenge zuva rese achicheka, handizive kana paine chiri kumunetsa kana kuti angori mucheche, ndingadai kunge iwe kundipa kuraira, ndatenda!
Pindura kuna Elia
Kittens inofanirwa kunge iina amai kwemwedzi miviri. Nemwedzi uye vhiki vanogona kudya makani ezvinyoro zvekatsi chikafu; chikafu chakaomarara hachikwanisi kutsengwa zvakanaka.
Kana akachema zvinofanirwa kunge nzara, kana nekuti ari kutonhora. Pazera rino havachakwanise kudzora tembiricha yemuviri wavo zvakanyanya.
NDINE MWEDZI UYE Hafu KITITI ASI HAADYA CHINENGE CHINHU CHEMAPEPASI, ANODA KUTI ANODYA CHOKUDYA CHEVANHU CHINONZI CHingwa.
Pindura kuna WILLIAM
Pamwedzi nehafu zviri nani kudya chikafu chakanyorova chekate, zvirinani kwemavhiki maviri.
Pamwedzi miviri unogona kupa chikafu chekatsi, chakanyoroveswa nemvura shoma kana chakasanganiswa nechikafu chakanyorova.
Armando Florez akadaro
Zvinoita here kuti katsi idziirwe iye achiyamwisa?
The kitten has a 1-mwedzi okuberekwa katsi.
Pindura kuna Armando Florez
Kwete, hazvigoneke. Pazera iro haasati asvika pakukura pabonde, chimwe chinhu chaachaita pamwedzi mishanu kusvika kumatanhatu.
Mhoroi, ndine katsi yenguva inokwana mwedzi mitatu, atova nemazino akazara, asi akaona kuti haadyi ega uye amai vake vachangobva kufa, chii chandingaite kumudyisa?
Pazera iro zvakakosha kuti atodya ega. Makineni emakiti, akachekwa zvakanaka. Tora imwe uiise mumuromo mako; wobva wavhara zvakasimba. Nesimba rayo pachayo rinomedza.
Izvi zvega zvinofanirwa kunge zvakakwana kumutsidzira kudya kwake, asi kana zvisiri, zviite kakawanda.
Mhoroi, ndine dambudziko hombe uye handizive zvekuita. Mhuri yangu neni takanhonga katsi mumugwagwa, aive nepamuviri uye aive nekitsi mumba medu dzinenge mwedzi nehafu yapfuura, nezuro husiku kati yakaenda uye haina kudzoka. Ini handizive zvekuita nekatsi, pane vatanhatu uye hapana munhu pano ane nguva yekudyisa maawa maviri kana matatu ega ega, zvinobatsira, handizive kuti ndovafudza chii kana chii.
Pazera iro vanofanirwa kudya chakanyorova katsi chikafu (magaba), kana chikafu chekatsi chakanyikwa mumvura.
Kana iwe usingakwanise kuzvichengeta, unogona kugara uchiisa 'kittens kupa' zviratidzo. Pamwe mumwe munhu anofarira.
Husiku hwakanaka, ndinoda kuziva kuti ndechipi chikafu mumabhurandi chandinogona kupa katsi yangu ine mwedzi miviri yekuzvarwa uye kuti ndomudzidzisa sei kuzvisunungura musechena.Ndatenda
Nemwedzi miviri, chakanakira kudya chikafu chakanyorova kweinenge mwedzi mitatu. Iyo inodhura pane kuoma, asi sezvo meno ako achiri kukura zvinogona kunge zvichinetsa kutsenga.
Imwe sarudzo ndeyekudzikisa chikafu chakaoma nemvura.
Zvisinei nezvaunopa iwe, inofanirwa kunge iri yekiti-yakatarwa.
Kana zviri zvigadzirwa, ndinokurudzira izvo zvisingashandise zviyo, zvakaita seApplaws, Acana, Orijen, Ravidzo yemusango, Yechokwadi Instinct Nyama Yakakwirira, nezvimwe.
Nezve wako wekupedzisira mubvunzo, mu ichi chinyorwa Isu tinotsanangura kuti tingakudzidzisa sei.
Mhoroi, ndine katsi rine mwedzi nemazuva mashanu ekuberekwa amai vake vakafa vachisununguka saka ndakamugamuchira mudiki kwazvo. Kittens dzangu dzakamwa mukaka wakasarudzika wekiti dzaisakwanisa kuyamwiwa naamai vadzo asi mazuva mashoma apfuura ndakachinjira kuchikafu chevacheche chakasimba, ini ndakaedza kuinyorovesa kunge puree ndokuisuma zvishoma nezvishoma mumuromo mayo, asi inozviramba uye ndinopedzisira ndamudyisa bhodhoro. Chii chandingaite kuti ndimubatsire kudzidza kudya ega?
Ndinokurudzira kushivirira uye kuramba ndichiomerera. Semuenzaniso, iwe unogona kumupa bhodhoro mangwanani, asi zvino masikati edza kuisa kadiki diki kechikafu chekitsi chakapfava mumuromo make. Ramba rakavharwa nekudzvanya zvinyoro nyoro kusvikira amedza, chimwe chinhu chaanofanira kuita nenzira yepamoyo.
Paunenge wapedza, chakajairika chinhu ndechekuti gare gare anoda kudya ari oga, asi kana iwe ukaona kuti haasati achizoda kumupa imwe zvishoma.
Zvishoma nezvishoma anofanira kudya ari oga, asi kana mazuva achifamba uye asingadaro, enda naye kuna vet kuti aone kana paine matambudziko.
Mhoroi, ndine mwana wemwedzi mitatu wechiPezhiya chinchilla kitten uye haazive madyiro, anonanzva chikafu uye paanoedza kuchibata, chinodonha kubva mumuromo make, handizive zvekuita ... Ndiri kunetsekana chaizvo kuti kusava mwana akadaro anodyisa mukaka chete.
Ndinoda rubatsiro, ndatenda!
Chinhu chekutanga chingave chekutarisa kuti uone kana uine chero matambudziko mumuromo mako, sekurwadziwa semuenzaniso. Saka chinhu chekutanga chandingakurudzira ndechekumuendesa kuna vet kuti anoongororwa.
Kana zvese zvanaka, edza kusanganisa wet kitten chikafu (magaba) nemukaka. Chidzimure zvakanaka kuti usatomboda kutsenga. Kana akaramba kudya, tora chikafu chidiki chakanyikwa mumukaka woisa mumuromo wake. Wobva wavhara zvakasimba asi pasina kukuvadza.
Nepfungwa, iye anofanira kumedza, uye mukuita kudaro angangozoona kuti anoifarira otanga kudya ega.
Kana zvisiri, edza zvakare kuisa chikafu chidiki mumuromo wake. Uye kana zvisiri, zvinoitika kwandiri kuti iwe unogona kumupa chikafu kuburikidza nesinji (isina tsono).
Loren Sugar akadaro
Mhoroi, gamuchirai katsi yemwana, ndakamuendesa kun'anga tikamutengera mukaka wakakosha asi anorara zuva rese uye patinomuburitsa mumba make anochema zvakanyanya, ane mazuva makumi matatu ekuberekwa.
Pindura kuna Loren azcarate
Pazera iro zvakajairika kuti vavate maawa 18-20. Kana akarara zvakanyanya, anogona kunge aine dambudziko rehutano rinoda kutarisirwa nemhuka. Zvichida hapana, asi kana zvasvika kune kittens idiki, usanyanya kufara.
Johan Andres akadaro
Ndokumbirawo, katsi yangu ikurumidze, amai vacho vakafa pandakava navo uye ndakanamata mumwe ane mazuva gumi nemashanu ekuberekwa uye haana kumbobvira aburitsa mazuva mashanu asi anodya zvakanaka uye anorara zvakajairika, ndoita sei? kana zvichirwadza nyangwe ndisingaone ngaanyunyute
Pindura Johan andres
Mukati memaminetsi gumi uchinge wadya, unofanirwa kusimudzira nzvimbo yekubereka ine donje rakanyoroveswa mumvura inodziya, nekuti pazera iri haazive kuzvisunungura.
Kuti umubatsire, kwiza dumbu rake (mudenderedzwa rinotenderera) maminetsi mashanu mushure mekudya.
Uye kana zvikasadaro, sanganisa chikafu chako nemafuta mashoma (madonhwe mashoma).
Mhoro! Mboro yangu yakave mukomana ndokuunza musikana wake kumba ndokubereka kittens nhatu. Vane mazuva makumi maviri. Nezuro ndakavhura shopu yehove ndikaunza ma steaks akati wandei kuti ndipe vabereki vatsva kuwedzera kune chikafu chakaoma. Ndirini pandinogona kupa hove (ndichaicheka zvakanaka) kuvacheche?
Yakatemwa zvakanaka unogona kutanga kuvapa izvozvi, asi zvirinani kumirira kusvikira vaine mamwe mazuva gumi 🙂
Mhoroi ndine dambudziko. Mboro yangu yanga ine kitsi ina, vane mazuva gumi nemanomwe ekuberekwa uye katsi haichadi kuyamwisa uye ndinonetsekana nekuti vari kuchema zvakanyanya, dzimwe nguva kubata katsi nechisimba uye chete ipapo katsi dzinodya. Kana kuti inogona kunge iri kati haina kuburitsa mukaka?
Pamazuva gumi nemanomwe ezera vanogona kutanga kudya chikafu chakasimba, chakapfava, senge chinyoro chekatsi chikafu. Vhura ichi chinyorwa inotsanangura maitiro ekuti vajaire kudya zvakaomarara.
Zvisinei, kana vakagona kuve nemukaka kwemamwe mazuva matatu, kudzamara vasvitsa makore makumi maviri, chingave chinhu chakanaka kwazvo kwavari.
Husiku hwakanaka, ndine katsi, akaomeswa musi waChikunguru 21, 2017 asi ane bhora diki muchikamu chekuvhiya, chiri mudumbu, zvichave zvakajairika.
Kana kati ikararama hupenyu hwakazara, iwe urikureva unoreva ronda rakaporeswa. Nekufamba kwenguva unozoona zvishoma.
Brian Becerra akadaro
Mhoroi, izvi hazvina zvakawanda zvekuita neizvi asi ndinovimba munokurudzira kuti ndigare ndega naamai vangu uye mangwanani ndinoenda kuchikoro uye amai vangu vanoshanda zvinoitika ndezvekuti kitsi dzangu (dziri shanu) dzatova mavhiki mana Kuchembera naAmai vangu vanoita sevanorwara sezvo ivo vasingade kudya uye nguva pfupi yadarika handidi kuvayamwisa uye nekitsi dzinopukunyuka kubva mubhokisi ravo uye dzinotanga kumedza zvakawanda uye handizive kana pamasvondo mana iyo katsi dzinogona kudya. Unogona kuona kuti havadi kusiya mai vavo tit, handizive zvekuita ndinotya kuti vangazorwara kana chimwe chinhu chaitika kwavari uye ndirikunetsekawo nezve hutano hwekitsi yangu
Pindura Brian Becerra
Kittens pamasvondo mana anogona kutodya chikafu chakanyorova, kana chikafu chakaomeswa chakanyikwa mumvura.
Kana vari amai, vanonyatsoonekwa nachiremba. Iye anozogona kukuudza iwe kuti chii chakashata nacho uye maitiro ekuchirapa.
Nemazuva makumi maviri unogona kutanga kuvapa chikafu chakanyorova chekatsi, dzakachekwa zvakanaka, asi mune ino mamiriro chinhu chakanakisa kuita kungava kuenda navo kun'anga kuti varege kufa zvakare.
Kitsi yangu ine mwedzi nemazuva mana ekuberekwa.Iye haana amai vacho uye macomments asi haaite tsvina, ndoita sei? ??
Iwe unofanirwa kupfuura nekotoni bhora yakanyoroveswa mumvura inodziya pamusoro penzvimbo yake yekubereka-maminetsi gumi mushure mekudya.
Kana zvisiri, zvipe iyo vhiniga (hafu yekapu kadiki). Aya ndiwo marongero aanofanira kuita kuzvisunungura.
Kitsi yangu yaive nekiti ina uye zvese zvainge zvichifamba mushe asi kusvika nhasi bvudzi rake riri kurasika zvakajairika kana kuti ari kurwara.
Kwete, hazvina kujairika. Ini ndinokurudzira kuenda naye kuna vet kuti anoongororwa.
Mhoroi, katsi yangu chubhu 4 kittens, nhasi vane mazuva gumi nemanomwe ekuberekwa, ivo vakanaka, vanoshanda, asi ndinonetsekana kuti mazuva ese ivo vanomuka nemaziso avo akanamirwa kune laganza uye zvakanaka ...
Pindura kuna Yira
Iwe unogona kuvachenesa ne gauze yakanyoroveswa neiyo chamomile infusion, katatu pazuva.
Kana vakasavandudza muvhiki, ndinokurudzira kuenda navo kun'anga.
Monica restrepo akadaro
Mhoro! Ndine kitsi mbiri dzinenge mwedzi nehafu uye havadi kudya zvakaomarara, bhodhoro chete, vanochema kunge vanopenga asi havaedze kutsvaga chikafu chakasimba ... vanondikurudzira! Ndatenda!!!
Pindura Monica Restrepo
Ndinokurudzira kutenga chikafu chakanyorova. Iwe unotora zvishoma nezvigunwe, wobva waisa mumuromo wake (zvakasimba asi pasina kumukuvadza). Mushure mekuyedza kaviri kana katatu, anofanirwa, nepfungwa dzake, kudya ega. Kana zvisiri, unogona kuzvisanganisa nemukaka usina lactose.
Mhoroi, ndinoshuva dai maigona kundibatsira, katsi yangu haichadi kuyamwisa kitsi uye vachiri nemazuva gumi nematatu ekuberekwa, ndinofanira kumumanikidza uye vanochema nenzara, ndoita sei?
Chokwadi, kittens dzinofanirwa kunge dzichinwa mukaka kweinopfuura imwe vhiki.
Kana amai vacho vasingade kuvapa, uchafanirwa kuvapa bhodhoro maawa matatu ega ega uye nekumutsa nzvimbo yekuzodza neyegirazi yakanyoroveswa mumvura inodziya kuti vazvizorodze.
Mukaka wakanakisa wemukaka ndeuyo wavanotengesa wakagadzirirwa mumakiriniki ezvokurapa nezvipfuyo, asi kana usingakwanise kuuwana, unogona kugadzira musanganiswa uyu:
50ml isina yogati (isina kunwiswa)
Raw zai yolk (isina chena)
Francisca lillo akadaro
Mhoroi, ndine katsi remwedzi mumwe nevhiki rimwe uye anotodya chikafu chakaomarara pasina dambudziko asi ndinonetsekana kuti mazino ake anokuvara, nekuti haasati akwana. Zvandinogona kuita?
Pindura kuna Francisca Lillo
Iwe unogona kumupa yakanyorova katsi chikafu, kana kusanganisa iyo kibble nemvura shoma. Asi usazvidya moyo nezvemeno ake: kana iwe ukaona kuti anotsenga zvakanaka, pasina kunyunyuta, hapana dambudziko.
elizabeth cordova akadaro
Mhoroi, katsi yangu yaive nekatsi ina, uye zuva rega rega katsi yemuvakidzani kuti mazuva ekuva nadzo ndakaasiya, kwataiisa mbwanana padhuze neyangu uye ndinoona kuti kati yangu yaneta uye inotsamwa panguva yekuvayamwisa .. Pane makumi masere ... uye vamwe vasara nemazuva makumi maviri, ndogona kuvabatsira aq havana nzara uye kati yangu yakadzikama ???
Pindura kuna Elizabeth cordoba
Nemazuva makumi maviri unogona kutanga kuvapa chakanyorova katsi chikafu (magaba), kungave wega kana kunyoroveswa mumvura inodziya.
Kana vakasadya, tora zvishoma nemunwe wako wozviisa mumuromo mako. Nounyanzvi vachachimedza. Kubva ipapo vangangodya vega, asi zvingave zvakafanira kudzorera chikafu mumiromo yavo.
Zviite zvakasimba asi zvinyoro nyoro, pasina kuvakuvadza.
Mhoroi, katsi yangu ine mavhiki mashanu, ndave kutomupa chikafu chekatsi, anonwa nemukaka wekati zvekuti ndinongomupa chikafu husiku chete. Asi ini ndinoona izvo zvezuva randingasarudza izvozvo panzvimbo pabibi. Inogona kupihwa kamwe chete pazuva ini ndinofunga haisati? Mune yepamambo canin mucheche bhegi inoisa 5gr maawa ese makumi maviri nemana
Nemavhiki mashanu unogona kutodya chikafu chakasimba, 5-2 pazuva. Sanganisa nemukaka wekati kusvika iye ave nemwedzi miviri yekuzvarwa.
Mhoroi, joni rangu rine mwedzi uye rinotora mukaka muhombodo. Inguva yekurega kupa here?
Mushure memwedzi unokwanisa kudya chikafu chekituru chakanyorova (magaba), asi chovhenganisa nemukaka, saka zvichave nyore kwauri kuti ujairire.
Mhoroi ini ndine katsi yemwedzi mumwe nevhiki mbiri uye kusahadzika kwangu ndekwekuti mukati mezuva inogadzira pee yayo uye tsvina yayo zvakanaka mubhokisi rine marara asi husiku zvinondiita uye ini handizive nei ... Uye imwe yaive ichipa mukaka usina lactose uye ndakaibvisa ndakaona kuti yaishandiswa kakawanda pazuva uye yakapfava kwazvo ... Mukaka unodiwa
Nemavhiki matanhatu kwete, hapana mukaka hauna basa 🙂. Ehe, iwe unofanirwa kutanga kunwa mvura. Iwe unogona kunyudza chikafu chavo mumvura inodziya kuti irege kuravira zvakare kusanzwisisika.
Viviana Veliz akadaro
Mhoroi, masvondo maviri apfuura takawana dzimwe kitsi muchairchair yakare mune patio yeimba yaamai vangu, hatizive kuti vakazvarwa riini kana kuti muridzi wavo ndiani, amai vakavapa mukaka asi zviri pachena kuti vakarega kuuya mazuva apfuura uye nhasi chete isu takazviona izvozvo nekuti vanochema chete uye havakwanise kufamba, baba vangu vakavasiira mukaka mukapu asi mumwe akawira mukati ndokufa, handizive zvekuita nekuti zvinoita sekunge vachazofa
Pindura Viviana Veliz
Kittens wechidiki uyu anofanira kunge ari munzvimbo yakasununguka uye inodziya, nekuti havazotanga kudzora tembiricha yemuviri wavo kusvika vasvitsa mwedzi miviri.
Uye zvakare, ivo vanofanirwa kunwa mukaka usina-lactose kubva mubhodhoro maawa matatu ega ega, uye mumwe munhu anofanira kuvakurudzira kuti vazvibatsire. Iwe une rumwe ruzivo pano.
Ndakawana kittens nhatu dzinenge vhiki nhatu. Uye ivo vane maziso anonamira uye hutachiona hwakaipa kwazvo uye handizive chekuvapa. Batsira!
Iwe unogona kushambidza maziso avo ne gauze yakanyoroveswa mune chamomile infusion, katatu pazuva.
Nemavhiki matatu vanogona kudya chikafu chakanyorova chekatsi (makani) akasanganiswa nemukaka mudiki wekati dzinotengeswa mumakiriniki ezvokurapa, kana nemvura inodziya, maawa ese 3-4.
Mhoroi, ndine katsi rezuva makumi mana. Ndinomupa mukaka wakaderedzwa nemvura chete. Uye anon'ora asi haadi. Ndakave nazvo kwemazuva matatu uye handizive kana zvakajairika kungomwisa mukaka, kana kana zvisiri. Ndatenda
Pindura kuna Florence
Panguva iyoyo unogona kutodya chikafu chakanyorova chekatsi (makani), yakasanganiswa nemukaka mudiki unozunzwa nemvura, kana nemvura yega.
Chero zvazvingaitika, kana akasazvipa, simbisa ano-genital nzvimbo ine gauze rakanyoroveswa mumvura inodziya maminetsi gumi mushure mekudya. Iwe unofanirwa kupopota kamwe chete pazuva.
Kana zvikasaita, ini ndinokurudzira kuenda nazvo kuna vet.
Maria Patricia Pena akadaro
Ndokumbirawo mundibatsire! Ndakagamuchira katsi, ingangoita mwedzi miviri yekuberekwa, vhiki rapfuura.
Panguva ino anga achingoda kunwa mukaka. Vhiki rino, akangozvibata kanokwana kuita zvishanu (ndakamutora nemusi weChitatu, Mbudzi 5 ndikazvichenesa neChishanu, Mbudzi 1, Mugovera, Mbudzi 3, Muvhuro, Mbudzi 4 (ka6) neChipiri, Mbudzi 2 (ka7.) Ini akaedza kudyisa tuna yake, yakanyorova kititi wiskas, nyama mbishi, kitiki ricocat, asi iye haadi kuravira chero, uye haana kunwa mvura.
Ndakamutora kuenda kun'anga neMuvhuro, Mbudzi 6, vakamutora tembiricha, vakandiudza kuti zvese zvainge zvakanaka uye kuti aingoita kunge akaguta, asi kwete kuzvimbirwa, zvakadaro akakurudzira kusanganisa mukaka wake nemafuta emuorivhi, ndakadaro, Asi raingova iro zuva iro raakazvibata kaviri uye kamwe zvakare zuva raitevera (Chipiri).
Anotamba zvakanyanya, anoita kunge asiri kurwara, asi ndinotya kuti acharwara nekuti haaite tsvina kana kudya chikafu chakasimba.
Pindura kuna Maria Patricia Peña
Mhoro Maria Patricia.
Nemwedzi miviri hongu, ndinofanira kudya chikafu chekatsi 🙁
Iyo inodhura, asi ini ndinokurudzira kumupa iye Royal Canin Baby Cat. Iyo kibble idiki kwazvo uye, ichifukidzwa nemukaka, kittens dzinowanzoifarira zvakanyanya. Kana iwe usingakwanise kuiwana kana kutadza kuibhadhara (chaizvo, mutengo wacho wakanyanya kukwirira), tsvaga macroquettes akadaro, nemukaka.
Imwe sarudzo ndeyekuchera chikafu chake mumukaka wauri kumupa.
Dzimwe nguva zvakafanira "kuvamanikidza" kuti vadye. Tora chimedu chechikafu - chinofanirwa kuve chakanyanya, chidiki-uye chiise mumuromo mako. Wobva wavhara zvinyoro nyoro asi zvine simba. Nenjere dzinomedza. Uyezve zvinogona kunge zvichitodya zvega, asi zvinogona kutora dzimwe nguva shoma.
Mangwani akanaka. Nhasi masvondo mana apfuura ndakanunura makiti maviri aive nemavhiki maviri ekuberekwa (zuva rakatevera vakavhura maziso avo). Kubva nezuro husiku havana kuda kunwa bhodhoro kana kudya concentrate yakanyoroveswa mumukaka, asi vanofarira kudya kwakaoma. Havadi kumwa mvura, ndoita sei? Ndatenda
Pindura kuna Agnes
Nemwedzi wehupenyu vanofanira kunge vatodya chikafu chakasimba. Kana vakaratidza kufarira rudzi urwu rwechikafu, icho chiratidzo chakanakisa.
Regai vadye, asi vadzivise nemukaka mushoma kana mvura, kunyangwe zvishoma. Kana kuti zvisizvo, vaise muchimwiro kuitira kuti vagone kudzidza kunwa mvura vega.
Mhoroi, ndine katsi kane mwedzi miviri yekuzvarwa (2nd dec) uye haichadi kudya chero izvozvi, ini ndatoedza kumupa pate kana kukanya makuki uye hapana .. ndinonetsekana nekuti katsi yangu (amai vake) kwete kwenguva yakareba ndiani anoyamwa uye ari kurasikirwa uremu Chimwe chinhu, zvakajairika kuti ndangotanga kuzvitorera nhasi? (Nov 25) Chii chaunokurudzira kuti ndiite?
Edza kumupa yakanyorova katsi chikafu chakanyoroveswa mumukaka kana inodziya mvura. Kana zvimwewo, tsvaga chikafu chekatsi kuchitoro chechipfuva chakanyoroveswa mumukaka, senge Royal Canin Baby Cat.
Mhoro! Isu takagamuchira dzimwe katsi svondo rapfuura. Vane mwedzi miviri uye svondo rimwe, asi ivo vanongoda kudya mukaka wakakosha wekatsi, takaedza kuvapa chikafu chakakosha chekatsi uye patés asi havana kuzviteerera, chinhu chega chakasimba chavanowana kudya muYork Ham, tinoedza viga mamwe mapereti ezvipfuyo muYork Ham, dzimwe nguva vaidya, dzimwe nguva vanoasvipa, asi izvo hazvisi kukwezva maziso avo, ndichaedza kudzikisa makoketi mumukaka wakakosha sezvandakaona mune mamwe makomendi. . Asi kana izvo zvikasashanda, ini handizive zvekuita futi! Chii chaunondikurudzira kuti ndiite? Tine shungu dzekuti ivo vadye vega izvozvi, sezvo tisingakwanise kuswera navo nekuti tinoshanda. Shuwiro yakanakisa.
Kana ndikunzwisisa. Imwe yekiti dzandiinadzo mubindu dzakaendawo nezvinhu zvakafanana nekitsi dzako.
Asi yakagadziriswa nekukurumidza nekumupa chikafu chekatsi chine mukaka.
Ini handinyanye kufarira kuipa ichi chiratidzo, asi ndozvazvinogona kuvabatsira kuti vazvijairire: Royal Canin Yekutanga Zera. Iyo inodhura kune zvazviri (ine zviyo uye zviyo hazvinyanyo kugaya katsi, uyezve zviri zvakachipa kwazvo), asi zvakanaka. Sekutanga kudya kwakasimba kunogona kunge kuchikosha.
Antonio Gonzalez akadaro
Mhoroi, mubvunzo ndine katsi mbiri uye vane mazuva makumi matatu nerimwe ekuberekwa uye handizive kuti ndovadyisa chii uye kuti mazuva mangani andinogona kuvabata
Pindura kuna Antonio González
Unogona kuvapa chakanyorova katsi chikafu chakasanganiswa nemukaka unodziya wekiti kana mvura.
Iwe unogona ikozvino kuvabata.
Mhoroi ndine katsi ine mazuva makumi maviri nemanomwe, amai vake vakamusiya aine mazuva matatu ekuberekwa, ndinoda kuziva kuti ndinogona here kumupa chikafu chakaomarara uye kusvika zera ripi randinofanira kupfuudza kudya kwake nemukaka, nekuti dzimwe nguva anoramba bhodhoro kana kuriruma ndatenda
Panguva iyoyo unogona kutomupa chikafu chakasimba (chakapfava). Soak mumukaka kwemwedzi nehafu kana kupfuura kana zvishoma, wozoisa mugaba nemvura kuitira kuti ijairire.
Mhoroi, ndine mbwanana ine mwedzi mumwe chete musi wa16 / 9/2018 ane mwedzi miviri asi ikozvino anodya ega, hapana chinoitika kana akadya ega ndinomupa mbwanana chikafu chekatsi uye chikafu chacho chinotsikwa saka chiri nyoro uyezve anonwa mukaka wefomula hapana chinoitika kana ukadya chikafu ichocho?
Pindura kune santy
Hongu, pazera iroro vanogona kutodya voga.
Makadii, mazuva maviri apfuura ndakatora katsi ine mwedzi miviri, ndakamutengera chikafu chinyoro uye chakaoma kuti awine, asi haadi kudya, anonhuwirira uye voila, kunyangwe aine nzara haadye, saka Ndatenga mukaka weupfu unonyungudika nemvura inodziya, ndinoda kuchengetedza kuti mukaka uyu unotsiva mukaka wemuzamu uye unodyiwa uri woga kubva mundiro, haudi bhodhoro kana chero chinhu ... mubvunzo wangu ndewekuti. Ndingamudzidzise sei kudya zvakaomarara uye nekusiya mukaka?
Chekutanga pane zvese, makorokoto pane izvo nyowani zvekuwedzera kumhuri. Chokwadi iwe uchanakidzwa nazvo zvakanyanya 🙂
Nezve mubvunzo wako, pamwedzi miviri unogona kutanga kudya chikafu chakanyorova chekatsi. Unofanira kucheka zvakakwana kuti zvimuitire nyore kuitsenga.
Ukasazviteerera kana kuzviramba, zvinyorovese nemukaka wauri kunwa. Kana akaidya, yakakwana. Sezvo vhiki dzinopfuura, iwe unofanirwa kuwedzera mukaka mushoma uye mushoma.
Muchiitiko chekuti asingaidye, uye sezvo, chokwadi, zvakakosha kuti adye, uchafanirwa kumumanikidza zvinyoro nyoro asi zvakare zvakasimba. Tora zvishoma zvinyoro zvekudya nechidimbu chemunwe, wozviisa mumuromo mako. Sezvo inogona kuita nepainogona napo kuidzinga, uchafanirwa kuchengeta muromo wayo wakavharwa kwemasekonzi mashoma, kudzamara yapedza kumedza.
Mushure meizvozvo, anogona kunge achidya ega, zvishoma nezvishoma.
Nei katsi yangu ichidya neshungu?